कांग्रेसले एमालेको दुई दर्जन मोटरसाइकलमा आगजनी गरेको आरोप
दोलखा, मंसिर ३ - एमालेले कांग्रेस कार्यकर्ताले आफ्नो कार्यकर्ताले प्रयोग गरेको एउटा बलेरो गाडी र दुई दर्जन मोटरसाइकलमा आगजनी गरेको आरोप लगाएको छ । दोलखा क्षेत्र नं. १ को गैरीमुदी गाविसमा पार्किङमा राखिएको एउटा बलेरो गाडी र ३० वटा मोटरसाइकलमा सोमबार साँझ
समाचार स्थानीय शरणार्थी राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय खेलकुद साहित्य/कला/संस्कृति
३ मंसिर, मोरङ । मोरङको डाँगीहाटमा ग्यास सिलिण्डर विष्फोट भएको छ । अज्ञात समूहले गएराति १० बजे डाँगीहाट-२ स्थित राधाकृष्ण मन्दिर छेउमा ५ केजीको ग्यास सिलिण्डर विष्फोट गराएको हो । गएराति अज्ञात समूहले गराएको विष्फोटबाट कुनै क्षति भने भएको छ
भोट हाल्न राजधानी छोड्नेको लर्को
काठमाडौ, मंसिर ३ - निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार कलंकी, कोटेश्वर चोक, रत्नपार्क र नयाँ बसपार्कमा दसैंझैं माहौल थियो । माइक्रो र यात्रुवाहक बसको लर्को थियो । झोला र लालाबाला बोकेर सर्वसाधारणहरू मतदान गर्न गाउँतर्फ जाने हतारोमा थिए ।
निर्वाचन कर्मचारीमाथि धारिले हतियार प्रहार
मकवानपुर- पदमपोखरीस्थित बुद्ध मावि मतदान केन्द्रमा खटिएका एक कर्मचारीमाथि धारिलो हतियार प्रहार भएको छ। पदमपोखरी–१ वनस्पती घर भई टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल हेटौंडामा कार्यरत सागरबहादुर गुरुङमाथि धारिलो हतियार प्रहार हुँदा उनी गम्भीर घाइते भएका हुन्। तीन जना
घामको झुल्कोसँगै आइपुग्यो दोस्रो संविधानसभाको चुनाव !
३ मंसिर, काठमाडौं । पहिलो संविधानसभा विघटन भएको डेढ वर्षपछि मंगलबार बिहान ७ बजेबाट मुलुकमा दोस्रो संविधानसभाका लागि मतदान हुने भएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगले मतदानका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । चुनावका लागि गठित सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो क
भोट हाल्नेसँग युद्ध सामाग्री किन्ने पैसा माग्दै वैद्य माओवादी
३ मंसिर, पाँचथर । वैद्य माओवादीले यहाँका मतदातालाई भोट हाल्न गएमा युद्ध सामग्री किन्ने पैसा उपलव्ध गराउन उर्दी जारी गर्न थालेको छ । जिल्लाका १५ बढी गाविसमा मार्चपास गर्दै वैद्य माओवादीका कार्यकर्ताले मतदाताको घर घरमा पुगेर भोट हाल्न नजान दवाब दिइरहेका छन्
मंसिर ३ र ४ गते एक घण्टा मात्रै लोडसेडिङ
Added on: 2013-11-17
काठमाडौं, मंसिर २ – संविधान सभाको चुनावलाई ध्यान दिँदै जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लोडसेडिङ नहुने भएको छ । सोमबार र चुनावको दिन मंगलबार जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लोडसेडिङ नहुने नेपाल विद्युत
मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले आज राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं, मंसिर २ – मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आज राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ।
पेट्रोल बम आक्रमणमा घाइते चालकको निधन
काठमाडौं, मंसिर २ – बाराको निजगढमा गुढिरहेको माइक्रोबसमा पेट्रोल बम प्रहारबाट घाइते भएका चालकको उपचारका क्रममा ज्यान गएको छ । कात्तिक २८ गते नचिनेका मान्छेको समूहले पेट्रल बम प्रहार गर्दा घाइते भएका निजगढ ५ का राजकुमार देउजाको उपचारका क्रममा शिक्षण
राष्ट्रपतिले मतदानका लागि देशवासीलाई अपील गर्दै
२ मंसिर, काठमाडौ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभा निर्वाचनमा मतदानका लागि देशवासीलाई अपील गर्नु हुने भएको छ । राष्ट्रपतिले वक्तव्य निकालेर मतदानका लागि अपील गर्ने तयारी गर्नु भएको शीतल निवास श्रोतले जनाएको छ ।
व्यवसायी सभासद्को विवादास्पद भूमिका
२ मंसिर, काठमाडौं । अघिल्लोपटक माओवादीको सिफारिशमा सरकारबाट मनोनित सभासद् बनेका ज्योती समहूका अध्यक्ष पद्म ज्योतीले समानुपातिकमा सो पार्टीबाट आएको प्रस्तावमा अहिले इच्छा देखाउनु भएन । अर्का वरिष्ठ उद्योगी प्रदीपकुमार श्रेष्ठले पनि दलहरुको प्रस्तावलाई
अर्थमन्त्रीद्वारा मतदाता परिचयपत्र ग्रहण
२ मंसिर, काठमाण्डौ । अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले काठमाडाँै महानगरपालिका वडा नं ९ स्थित बत्तीसपुतली मतदान केन्द्रमा स्वयम् उपस्थित भई मतदाता परिचयपत्र लिनुभएको छ ।
चुनावी खर्च ३२ अर्ब, मूल्यवृद्धि १३ प्रतिशत पुग्ने
२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिए पनि चुनावी खर्च, डलर अधिमूल्यन र रेमिटान्स वृद्धिको कारण १३ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने अनुमान विश्लेषकहरुले गरेका छन् । १० प्रतिशतभन्दा कम मूल्यवृद्धि
कांग्रेस कार्यकर्तामाथि छुरा हानेको अभियोगमा युथफोर्सका कार्यकर्ता पक्राउ -
२ मंसिर, संखुवासभा । युवा संघका नेता परशुराम बस्नेतको भाषणपछि भएको झडपका क्रममा कांग्रेस कार्यकर्तामाथि छुरा हानेको अभियोगमा युथफोर्सका दुईजना कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
बम हान्न निर्देशन दिनेलाई पक्रन्छौं : गृहमन्त्री
२ मंसिर, काठमाडौ । चुनावी सरकारका गृहमन्त्री माधव घिमिरेले सर्वसाधारणमाथि बम हान्न निर्देशन दिने वैद्य माओवादीका नेतालाई सरकारले चाँडै गिरफ्तार गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने बताउनुभएको छ ।आइतबार सिंहदरवारस्थित गृहमन्त्रालयमा पत्रकार
जनतालाई बम हान्ने आतकंकारी : प्रमुख निर्वाचन आयूक्त
Added on: 2013-11-16
१ मंसिर, काठमाण्डौ । प्रमुख निर्वाचन आयूक्त निलकण्ठ उप्रेतिले जनतामा भय त्रास उत्पन्न गर्ने र अमानवीय आक्रमण गर्नेहरु आतंककारी भएको बताउनु भएको छ । उहाँले अबोध नागरिकहरुलाई हिंसाको सिकार बनाउनेहरुलाई आतंककारी बाहेक केही भन्न नसकिने स्पष्ट पार्नु भयो ।
नेपाल र केन्या दोश्रो पटक भीड्दै
काठमाडौं, मंसिर १ - युएईमा भैरहेको ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेटको छनौट खेलम नेपाल आज केन्यसँग भीड्दैछ । नेपाली समय अनुसार अपरान्ह पौने चार बजे दुवईको ग्लोबल क्रिकेट एकेडेमी ओभल २ मा हुने खेलमा नेपालले बलियो र अनुभवी केन्याको सामना गर्न लागेको हो । बंगलादेशमा हुने २० ओभरको विश्वकपका लागि आजको खेल नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । हिजो भएको पहिलो खेलमा नेपालले डेनमार्कलाई हरायो भने केन्याले पपुवा न्यूगिनीसँग १७६ रन बनाएर पनि जित्न सकेन । गत वर्षको प्रतियोगितामा दुवै देश छनौट हुन सकेका थिएनन् । १६ देश सम्मिलित प्रतियोगितामा नेपाल सातौं र केन्या नवौं भएका थिए । केन्या ५० ओभरको विश्वकप खेलिसकेको र एकदिवसीय क्रिकेट खेल्न मान्यता प्राप्त देश हो । पछिल्लो भेट नेपालको पक्षमा नेपाल र केन्याबीच दोस्रो पटक भेट हुन लागेको हो । गत वर्षको छनौटमा नेपाल र केन्या फरक फरक समूहमा थिए । समूह बीमा चौथो स्थानमा रहेको केन्या र समूह एको पाँचौ स्थानमा रहेको नेपालले सातौं स्थानको सेमिफाइनलका लागि खेलेका थिए र जसमा नेपालले बाजी मारेको थियो । टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले निर्धारित २० ओभवरमा ४ विकेट गुमाएर १३९ रन बनाएको थियो । ४ विकेट मध्ये ३ विकेट बसन्त रेग्मीले लिएका थिए । १४० रनको विजयी लक्ष्यलाई नेपालले खेल सकिन २ बल बाँकी छन ५ विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो । अनिल मण्डल र प्रदीप ऐरीले पहिलो विकेटका लागि ६४ रनको साझेदारी गर्दै नेपालको जितको आधार तयार पारेका थिए । त्यतिबेला प्रदिपले ४५, अनिलले ३२ र कप्तान पारस खड्काले नटआउट २६ रन बनाएका थिए । नेपालले आज केन्यालाई हराउन बल र ब्याट दुवैमा राम्रो गर्नुपर्नेछ । प्रारम्भिक जोडी जम्न नसक्नु नेपालको समस्या बनेकोले प्रारम्भिक जोडीले ठोस सुरुवात गरे नेपालले पुरानो नतिजा दोहोर्यानउन सक्नेछ । सन् २००३ को विश्वकपमा सेमिफाईनलमा पुगेको केन्याले सन्यास लिइसकेका अलराउण्डर स्टीभ टिकोलोलाई टीममा बोलाएको छ ।
नेकपा–माओवादीका भेरी कर्णाली इन्चार्ज प्रक्राउ
सुर्खेत, मंसिर १ – नेकपा–माओवादीका भेरी कर्णाली राज्य समितिका इन्चार्ज मायाप्रसाद शर्मा ‘पारसमणी’लाई प्रहरीले प्रक्राउ गरेको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर १ ढोडेखालीबाट बांगेसिमल जाँदै गरेका शर्मालाई शनिबार विहान ९ बजेतिर पक्राउ गरेको माओवादीले जनाएको छ ।
सेनाले बम डिस्पोज गरेपछि यातायात सञ्चालनमा
सप्तरी, मंसिर १ – सप्तरीको कल्याणपुरमा भेटिएका दुई वटा शक्तिशाली बम नेपाली सेनाले डिष्पोज गरेको छ । जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको अखिल तराई मुक्ति मोर्चाले पूर्व पश्चिम राजमार्गको कल्याणपुर र आरके आयल ट्रेडर्स सप्लायर्समा राखेको सकेट बम नेपाली सेनाको टोलीले डिष्पोज गरेको हो । बमका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग तीन घण्टा अवरुद्ध भएको थियो । बम डिष्पोज गरिएपछि अहिले राजमार्गमा गाडी चल्न थालेका छन् ।